अन्तत : बाबुरामको पार्टी बिघटन नै हुने भो ! - Nepali Online News Media-shikharnews.com - shikharnews.com
अन्तत : बाबुरामको पार्टी बिघटन नै हुने भो !
काठमाडौं । अन्तत बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपाल बिघटनको संघारमा पुगेको छ । नयाँ शक्तिका बरिष्ठ नेता देवेन्द्र पौडेलसहितले बिहिबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टी सार्वजनिक गरेर पार्टी बिघटनको संघारमा पुगेको घोषणा गरेका छन् ।
उनले भनेका छन् , ‘काम गर्ने र नगर्ने छयासमिस एउटै स्तरमा राखियो । राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई उत्पीडन गर्नेसम्म गरियो । कतिपय पदीय महत्वकाँक्षी बढेर गयो । मुलत नेतृत्वबाट यसलाई रोक्नुको सट्टा प्रोत्साहन गरियो र पार्टी उल्टो दिशाबाट हिडन थालेपछि तल जोश जाँगर रहेन र बिघटनको स्थितिमा पुग्यो’।
पत्रकार सम्मेलनमा बाडिएकाे विज्ञप्तिमा पौडेल नेतृत्वको समूहले भनेको छ ‘नयाँ शक्ति पार्टीमा पटक पटक कुरा उठाउँदा पनि यसको सुनुवाई भएन । हुनुपर्ने के थियो भने संगठन विस्तार र चुस्त राख्नका लागि निर्णयलाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने निर्णयको स्वामित्व लिने र दृढतापूर्वक लागू गर्नु पर्ने थियो । त्यसो भएन ।’
‘काम नहुँदा निर्देशन दिने र निरिक्षण गर्ने सम्मका काम भएन । सतही रिपोर्टमा भर पर्ने र कसैले कुरा उठायो भने उसैलाई किनारा लगाउने प्रबृत्तिको विकास भयो । गतिशिल पार्टी बनाउने भनेकोत जनसम्बन्ध विकास गर्ने,घर घरमा समर्थक,टोल टोलमा पार्टी कमिटी निर्माण गर्ने,आवश्यकता र क्षमताको आधारमा काम बिभाजन गरेर अगाडि बढनुको सट्टा व्यक्ति हेरेर जिम्मा दिने,नयाँ र पूरानाको बहाना बनाएर कार्यविभाजन गर्ने यो नै संगठनमा देखा परेको संकिर्णता हो’ उनीहरुले भनेका छन्‘नयाँ शक्ति बन्ने बित्तिकै महत्वकाँक्षीहरुको गुटहरु बन्दै गए । इमान्दार रुपमा खटेकाहरुलाई अपमानित गरियो । एक पछि अर्को गल्ती हुँदै गएर राजनीतिक कार्यकर्ता र गैरराजनीतिक कार्यकर्ता वीच बहस शुरु भयो ।’
पौडेलसहित १५ जना नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी १० बुँदे अपिल जारी गरेका छन् ।
‘हामीले बामलोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण भएको कार्यदिशा अगाडि सारयौ । यो सारसंग्रहवाद या सम्झौतावादको राजनीति हो । फेरी सम्मुन्नत समाजवाद गन्तव्य भन्यौ । यो झन अन्तरबिरोधी नै भयो’ अपिलमा भनिएको छ‘ हामी जाती,वर्ग,क्षेत्र,लिंगका पक्षधरता,वर्ग बिभाजन समाजमा कुन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हो र कुन वर्गको राजनीति गर्ने हो भन्ने बारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । हामी माक्र्सवाद गतिशील बिज्ञान हो । यसलाई जडको रुपमा नबुझि हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार विकास गरेर अगाडि बढने पक्षमा छौ । हाम्रो प्रस्तावमा बामलोकतान्त्रिक छ,अझ त्यसको परिभाषा गर्दा त्यो बाम पनि होइन,लोकतन्त्र पनि होइन,यो त फ्रन्टिष्ट हो भनेर व्याख्या गर्दा त्यो सुनेर गम्भिर बनाएको छ । र उखान छ,कहि नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो मात्र होइन,सयौ बर्षदेखि दार्शनिक रुपले प्रमाणित गरेको सार्वभौम दर्शनप्रति व्यङग्य भएको छ ।’
पटक पटक छलफल गर्दा पनि आफूहरुका कुराहरुको सुनुवाई नभएको उल्लेख गर्दै अपिलमा भनिएको छ ‘हामी उत्पीडित र श्रमिक वर्गको स्वामित्व रहने गरी स्थापना हुने समाजवादको पक्षमा छौ । यसका लागि राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट हुनु पर्दछ ।’